Kupona Mars: Pazasi uye Beyond Yakaburitswa neRuzhinji rweZvino Zvemukati | Linux Vakapindwa muropa
Surviving Mars inowana dzokororo nyowani inonzi Pazasi nepashure. Isu tanga takurukura nezve Kupona Mars zita muLxA pane dzimwe nguva. Iro vhidhiyo yemutambo zita mauri kuvaka koloni paMars uye kupona mamiriro epasi rino. Mutambo wekunyepedzera wesainzi uyo watove kufadza vatambi vazhinji, uye izvo zvicharamba zvichirwisa. Musoro wacho wainyatso kuvimbisa, uye ikozvino zvichave zvakanyanya nekubuditswa kutsva.
Paradox Inopindirana yasarudza kutangazve kusimudzira zvakare uye kuunza ichi chitsva kuKupona Mars. Vakasangana nematambudziko uye zvakawanda zvekuita munzira, asi kuedza kwakabhadhara. Nekudaro, zvinoita sekunge iwo maviri maDLC (DownLoadable Zvemukati, kana zvirimo zvinotakurika) uye mutambo pachawo unova usina kugadzikana. Ndokusaka ivo parizvino vaine mamaki akashata muzvitoro zvakaita seParadox kana Steam, uye kunyangwe muzvitoro zvepamhepo zvakaita seHumble Store uye GOG uko zita uye maDLC aripo.
Mushambadzi wako mutsva, AbstractionAne basa rakawanda pamberi pake rekutora iwo akadzoreredzwa uye akanaka makomendi kuti adzoke. Muchokwadi, kumwe kudzokorodza kwakatotangwa kugadzirisa mamwe matambudziko anokurumidza, nepo mamwe asina kunyanya kusarudzika achiri kumirira mhinduro ichafanirwa kuuya munguva pfupi inotevera. Semuenzaniso, yeiyo Linux vhezheni, inogara ichikanganisa kukanganisa mameseji akapinda munzira yeiyo skrini akagadziriswa.
Para kuwana Pazasi uye Beyond, iwe unofanirwa kutanga watenga iyo yekutanga Kupona Mars zita. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kutenga iyo yose franchise inoenderana nezita iri, kana mapakeji ayo anowanikwa kuti uwane zvese, senge DELUXE.
Tenga Kupona Mars, tarisa matrailer, uye rumwe ruzivo - Valve's Steam Saiti
Kana kana iwe uchida, iwe unogona kuwana iyo yepamutemo Paradox webhusaiti - Paradox Plaza Saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kupona Mars: Pazasi uye Kupfuura Yakaburitswa Nezvakawanda Zve Nyowani Zvemukati
Voodoo Kid: yegore ra1997 iro rinodzokera zvakare kuLinux